We Fight We Win. -- " More than Media ": သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ သက်တမ်း ၃ နှစ် အတွင်း တိုးတက်မှု နှင့် မတိုးတက်မှု အချက် ၁၀ ချက်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ သက်တမ်း ၃ နှစ် အတွင်း တိုးတက်မှု နှင့် မတိုးတက်မှု အချက် ၁၀ ချက်
အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများ နှင့် လစ်ဘရယ် အယူရှိသူများ က မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမ္မတ လို့ ကင်းပွန်းတပ်ထားတဲ့ လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ကို ဦးတည်သွားနေပါတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ သူရဲ့ သမ္မတ ၃ နှစ် သက်တမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွက် အကျိူးရှိမည့် ( သို့) ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး တောင်းဆိုသည့် အချက်တွေ ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရသလဲ၊ ဘယ်အချက်တွေ မှာ တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့သလို၊ ဘယ်အချက်တွေ ကတော့ တိုးတက်မှုတွေ မရှိသလဲ ဆိုတာ ယေဘူယျ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်-
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၃ နှစ် သက်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တိုးတက်မှုရှိလာတဲ့အချက် တွေ ကို လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်ရင်-
၁) လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး အဓိကရုန်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ မြန်မာ့ သမိုင်းတလျှောက် မှာ မကြုံဖူးအောင် တိုးတက်များပြားလာခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ( Evil and Destructive Elements) တွေ ကို ထောက်ခံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို မြို့ကြီးတွေ မှာ အယင်ကထက် ပိုတွေ့လာရတယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေ ကြီးထွားလာအောင် လှုံ့ဆော် တာတွေ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ အယင်ကထက် ပိုတွေ့လာရတယ်။
၂) ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ ရေ၊မီးကောင်းစွာ မရသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ဟာ နိုင်ငံတကာ မြို့ကြီးတွေ ရဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းတွေ ထက်တောင် ဈေးကြီးနေတာတွေ ကို တွေ့ရတယ်။
၃) အစိုးရ အသုံးစရိတ် တိုးတက်လာတာတွေရတယ်။
၄) နိုင်ငံအတွင်းငွေကြေး ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု ပမာဏ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။ လူထု က လည်း ဘဏ်တွေ ကို အယုံအကြည်မရှိလို့ ငွေမအပ်ဘူး၊ ဗဟိုဘဏ် မှာ လည်း ငွေမရှိလို့ ၊ ထပ်ထုတ်နေရတယ်။ အစိုးရ အသုံးစရိတ်တွေ များပြားလာပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ဟာ ၇ထွီလီယံ ကျော်ဖြစ်လာနေပြီ ဖြစ်တယ်။
၅) အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေ ရဲ့ နိုင်ငံခြား လေ့လာရေးပျားရည်စမ်း ( Political Honeymoon) ခရီးစဉ်တွေ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။
၆) နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုတွေ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။
၇) နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေများလာတာတွေ့ရတယ်။
၈) ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။
၉)ပြည်တွင်း ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်၊ ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည် ဦးရေ တိုးလာတာတွေ့ရတယ်။
၁၀) Social injustice လို့ခေါ်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း မှာ မတရားမှုတွေ တိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။
လွှတ်တော်မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့် အများဆုံးရရှိထားတဲ့ ပြည့်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ၃ နှစ် သက်တမ်း မှာ တိုးတက်မှု မရှိတဲ့အချက်တွ ကို လေ့လာကြည့်ရင်-
၁) မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ကို မပြင် နိုင်သေးဘူး။
၂) ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ချဖို့ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး၊
၃) အမျိုးသားလုံးဆိုင်တဲ့ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးဘူး၊
၄) အခြေခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ လူနေမှု အဆင့်မြင့်မားလာမှု မရှိသေးဘူး၊
၅) လူလတ်တန်းစား မြင့်တင်မှု ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုမရှိသေးဘူး၊
၆) လယ်မြေသိမ်းမှု၊ လယ်မြေပိုင်မှု ပြဿနာတွေ မဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးဘူး၊
၇) လူသားတိုင်းရဲ့ အခွင့်အရေး နှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူး၊
၈) တရားစီရင်မှု နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နယ်ပယ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့် တိုးတက်လာမှု မရှိဘူး၊
၉) နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပုံစံ မတွေ့ရသေးပါဘူး၊
၁၀) စီးပွားရေး။ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကို လျော့ချ နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး
I supported your comments. Today the new government just showed up their magic tricks to our people and international communities. Only talking too much, working less. Nothing change for our people, Human Rights, living without fear, prosperity and development. Great corruption still alive.
Pls advise how to correct the worse things? Awaiting your suggestion next post.